Wazi njani ukuba unesicelo esibi kwifowuni yakho ye-Android | I-Androidsis
Ungayibona njani ukuba unayo ii -apps ezinobungozi kwifowuni yakho ye-Android
UEder Ferreño | | Khu seleko, Tutorials
Kungenzeka ukuba Ngaba ukhe wafaka usetyenziso olubi kwifowuni yakho ye-Android?. Kodwa ngekhe sazi kwangaphambili ukuba sisicelo solu hlobo, esinokubangela iingxaki kwisixhobo. Ke ngoko, kufuneka sihlale sithathela ingqalelo imiba ethile, enokuthi isincede siqonde ukuba ngaba isicelo esisifakileyo sinobungozi ngokwenene.
Ukusukela xa sifaka usetyenziso lolu hlobo kwifowuni yethu ye-Android, kuhlala kukho imiqondiso, eya kuthi ngokuqinisekileyo isincede siyiqonde le nto. Emva koko sikushiya ne izinto eziphambili ekufuneka uzithathele ingqalelo. Ukongeza, kukwakho iingcebiso zokuphepha ukufaka nayiphi na.
1 Ukuziphatha kwefowuni yakho
2 Ujonga njani ukuba ngaba iyinto enobungozi?
3 Kufuneka wenze ntoni ukuba ngaba le app iyingozi?
Ukuziphatha kwefowuni yakho
Kwiimeko ezininzi, kuhlala kulula ukufumanisa ukuba sisifakile na isicelo esibi kwifowuni yethu ye-Android. Kuba ifowuni ngokwayo inokuba nokuziphatha okungaqhelekanga, yiyo le nto isincedayo sazi ukuba ngaba sifake isicelo solu hlobo kuyo. Luhlobo luni lokuziphatha esithetha ngalo?
Kungenzeka emva kokufaka usetyenziso kwisixhobo sakho se-Android, uyaqaphela ukuba ibhetri idonsa ngokukhawuleza okukhulu Kunesiqhelo. Ukuba ukusetyenziswa kwebhetri kuye kwanda kakhulu, kunokuba kungenxa yokuba kukho ingxaki kwesi sicelo. Kuyacetyiswa ukuba uyithathele ingqalelo le nto kwaye ubone ukuba iyenzeka na loo nto.
Kodwa ayisiyiyo kuphela ibhetri enokuchaphazeleka. Ngamanye amaxesha, xa ufaka usetyenziso olubi, siyayibona ifowuni icotha kancinci okanye inezinto ezingasebenzi kakuhle, ezinje ngokuba ngumkhenkce okanye ukuqala kwakhona ngokungalindelekanga. Ukuba olu hlobo lokuziphatha lwenzeka emva kokufaka usetyenziso, kunokuba kungenxa yokuba usetyenziso lubangela iingxaki, kwaye mhlawumbi lungendawo.
Ngamafutshane, Zonke iindlela zokuziphatha ezingaqhelekanga, ezingenzeki rhoqo kwifowuni yakho ye-Android, yinto ekufuneka siyithathele ingqalelo. Ngokukodwa ukuba ezi ndlela zokuziphatha ziqale emva kokuba ufake usetyenziso. Zizimpawu ezicacileyo.
Ujonga njani ukuba ngaba iyinto enobungozi?
Ngethamsanqa, i-Android iye yaziswa ngezixhobo ezahlukeneyo ezinokusinceda sigqibe ukuba ngaba isicelo siyingozi okanye hayi. Xa sikhuphela usetyenziso kwiVenkile yokudlala, siyabona ukuba kuyaqinisekiswa yi-Play Protect, into engasoloko isenzeka. Ukuba nesatifikethi kucinga ukuba kukhuselekile, kodwa ukuba ngaba le app ayinayo, kunokwenzeka ukuba inobungozi. Kwaye Dlala uKhuselo sisixhobo isebenza kakuhle kakhulu.
Nathi sinako ukwenjenjalo jonga kuGoogle Khusela uKhuselo kuseto lwefowuni yethu ye-Android. Siya kuseto nakwicandelo lokhuseleko esinalo icandelo lokuDlala ngokuKhusela, elibonisa ukuskena okwenziwe sesi sixhobo. Apho siya kuba nakho ukubona ukuba ngaba isicelo esichaziweyo sinobungozi okanye akunjalo.
Kwakhona, singasoloko sisebenzisa i-antivirus ye-Android, Ukuskena kuyo ifowuni kwaye uqinisekise ukuba isicelo eso sinobungozi ngokwenene. Le yinto ekufuneka siphethukele kuyo ukuba sinokusola, kwaye oko kunokuba luncedo kule meko ithile.
Kufuneka wenze ntoni ukuba ngaba le app iyingozi?
Ukuba ngenene, sikwazile ukufumanisa ukuba sisicelo esibi, esiba idatha okanye esazisa enye ye-malware kwifowuni, Kuya kufuneka siyisuse kwangoko kwifowuni yethu ye-Android. Le nto ihlala iyinto yokuqala ekufuneka siyenzile. Ukuba sazi ngakumbi ngomsebenzi wayo, kungafuneka sitshintshe ipassword okanye sidlulise i-antivirus ukuqinisekisa ukuba ifowuni icocekile.
Xa usetyenziso esilukhupheleyo luvela kwiVenkile yokudlala, sinethuba lokuyixela, njengoko sinifundisile, ukuze uGoogle ayisuse kwivenkile yeapp. Ngale ndlela sithintela abanye abasebenzisi ekuhambeni kwimeko efanayo nathi kule meko. Apha ungabona isikhokelo oko kuya kukunceda ekuthengweni kwezicelo, ezingasetyenziswa kuwe kwixa elizayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Tutorials » Ungayibona njani ukuba unayo ii -apps ezinobungozi kwifowuni yakho ye-Android
I-Huawei ekhethekileyo: Ungayigcina njani inyathelo ngenyathelo ngenyathelo
Uyihlela njani imiyalezo kwiTelegram ukuyenza ibonakale